Sajhasabal.com | Homeअसोज ४ गतेदेखि नयाँ नोट साट्न पाइने, एक व्यक्तिले कति साट्न पाइन्छ ?
असोज ४ गतेदेखि नयाँ नोट साट्न पाइने, एक व्यक्तिले कति साट्न पाइन्छ ?
भदौ २८, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज ४ गतेदेखि दशैंका लागि नयाँ नोट वितरण गर्ने भएको छ । असोज ४ गतेदेखि राष्ट्र बैंक बालुवाटार कार्यालय र प्रदेश स्थित प्रादेशिक कार्यालयहरुबाट नयाँ नोट वितरण हुने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले जानकारी दिए ।